ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟာဗားနားမြို့ရှိ ဟိုတယ်ပေါက်ကွဲမှုတွင် သေဆုံးသူ ၄၂ ဦးထိ မြင့်တက် - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကို ဖော်ညွှန်းသည့် မိုင်းပြတိုက် ပြသထား
ကျူးဘားနိုင်ငံ ဟာဗားနားမြို့ရှိ Saratoga ဟိုတယ် ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အပျက်အစီးများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဟာဗားနား ၊ မေ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က ကျူးဘားနိုင်ငံဟာဗားနားမြို့လယ်ရှိ သမိုင်းဝင် ဟိုတယ်တစ်လုံး ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း မေ ၁၀ ရက်က အပျက်အစီးပုံများအကြား နောက်ထပ် ရုပ်အလောင်း ၂ လောင်းကို ထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသူ အရေအတွက်သည် ၄၂ ဦးထိ မြင့်တက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်သတင်းအရင်းအမြစ်များအရ သိရသည်။ဟာဗားနားမြို့ရှိ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် Saratoge ဟိုတယ်ပေါက်ကွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရသူ ၉၆ ဦးရှိကြောင်း နှင့် ဟာဗားနားမြို့တော်အတွင်းရှိ ဆေးရုံ ၆ ခုတွင် လက်ရှိအချိန်ထိ တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူ လူကြီး ၁၃ ဦး နှင့် ကလေး ၅ ဦး ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အခန်းဖော် နှစ်ဦး နှင့် ထမင်းချက်တစ်ဦး အပါအဝင် ပေါင်း လူသုံးဦး ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သဖြင့် ကယ်ဆယ်ရေးသမားများသည် အပျက်အစီးပုံများအကြား ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအုပ်စု(Gaviota) မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Roberto Enriquez က ဆိုသည်။
မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အဆောက်အဦထဲ အလုပ်သမား ၅၁ ဦး ရှိနေခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းတို့အနက် ပေါက်ကွဲမှုအတွင်း လူ ၂၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာသူများအနက် ၂၂ ဦးမှာ ဆေးရုံမှ ဆင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့် သုံးဦးမှာ ဆေးရုံတွင် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း Enriquez ကဆိုသည်။
ယင်းမတော်တဆမှုသည် ပြီးခဲ့သော မေ ၆ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ဓာတ်ငွေ့အရည် ၁၀,၀၀၀ လီတာ ခန့် တင်ဆောင်လာသော လောင်စာဆီတင်ယာဉ်တစ်စင်းပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားရာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျူးဘား ပြည်သူ့အင်အားစုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဌာနချုပ်များတည်ရှိရာ အမျိုးသားလွှတ်တော်အနီးရှိ
Saratoga ဟိုတယ်သည် ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံရန် ပိတ်ထားပြီးနောက် နိုင်ငံ၏ ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်နံလန်ထူရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် မေ၁၀ ရက်တွင် ပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ရန် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။(Xinhua)
#Havana, #hotel, #blast, #xinhua, #xinhuamyanmar, #
Death toll from Havana hotel blast rises to 42
HAVANA, May 10 (Xinhua) — The death toll from last week’s explosion atahistoric hotel in downtown Havana climbed to 42 on Tuesday, after two more bodies were recovered from the rubble, official sources said.
According to the Public Health Ministry, 96 people were injured in the blast at the five-star Saratoga Hotel, and 13 adults and five minors remain hospitalized at six city hospitals.
Rescue teams continued to sift through the debris in search of three people, two chambermaids andacook, reported missing, said Roberto Enriquez, spokesman for the state-run hotel management group Gaviota.
At the time of the accident, said Enriquez, 51 employees were in the building: 23 of them died in the explosion, 22 have been discharged from hospital, and three remain hospitalized.
The accident occurred around noon on Friday whenatanker truck carrying some 10,000 liters of liquefied gas exploded.
Located near the National Capitol, headquarters of Cuba’s National Assembly of People’s Power, the Saratoga was preparing to reopen on Tuesday as part of the country’s tourism recovery efforts, after closing for renovation.
Photo taken on May 6, 2022 shows the damaged Hotel Saratoga after an explosion in Havana, Cuba. (Photo by Joaquin Hernandez/Xinhua)
ယူကရိန်းအစိုးရက ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုများ သိမ်းယူရေးကို အတည်ပြု